တောင်ကိုရီးယား မိဘတွေဟာ ဘာကြောင့် သားသမီးတွေကို ဘွဲ့ရရင် မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးကြတာလည်း ? | Buzzy
တောင်ကိုရီးယား မိဘတွေဟာ ဘာကြောင့် သားသမီးတွေကို ဘွဲ့ရရင် မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးကြတာလည်း ?
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေကို အထိမ်းအမှတ် လက်ဆောင်ပေးကြတာ မဆန်းလှပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခေတ်သစ်ကြီးမှာ တောင်ကိုရီးယား မိဘတွေဟာ သူတို့သားသမီးတွေကို ဘွဲ့ရတဲ့အခါ လက်ဆောင်အဖြစ် မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးတယ် ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းထူးခြားနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ?
ယနခေ့တျေမှာတော့ မိဘတှဟော သားသမီးတှကေို အထိမျးအမှတျ လကျဆောငျပေးကွတာ မဆနျးလှပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့လညျး ခတျေသဈကွီးမှာ တောငျကိုရီးယား မိဘတှဟော သူတို့သားသမီးတှကေို ဘှဲ့ရတဲ့အခါ လကျဆောငျအဖွဈ မကျြနှာခှဲစိတျပွုပွငျပေးတယျ ဆိုတာကတော့ နညျးနညျးထူးခွားနပေါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျး ?
တောင်ကိုရီးယားမိဘတွေဟာ သူတို့သားသမီးတွေကို အထက်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်စတက်ပြီ ဆိုကတည်းက အနာဂတ်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်တွေ ထားရှိလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းတွေအရ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ဘရာဇီးနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ထက်တောင် မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုနှုန်း များတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားမိဘတှဟော သူတို့သားသမီးတှကေို အထကျတနျးအောငျလို့ တက်ကသိုလျစတကျပွီ ဆိုကတညျးက အနာဂတျအတှကျ ရညျရှယျခကျြတှေ ထားရှိလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ စဈတမျးတှအေရ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံဟာ ဘရာဇီးနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံတို့ထကျတောငျ မကျြနှာခှဲစိတျပွုပွငျမှုနှုနျး မြားတဲ့ နိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။
စစ်တမ်းတွေအရ မိဘတွေဟာ များသောအားဖြင့် blepharoplasty လို့ ခေါ်တဲ့ မျက်ခွံပြုပြင်မှုကို အများဆုံး ပြုလုပ်ပေးရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုးလ်မြို.က ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးက ကိုရီးယားအများစုဟာ မျက်လုံးမလှကြတာမို့ ဒီခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုဟာ အထူးရေပန်းစားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာရှသားအများစုဟာ မျက်နှာမှာ မျက်လုံးတဝိုက်ဟာ အရေးကြီးဆုံးလို့ ခံယူထားကြတာမို့ ဒီလိုပြုပြင်ကြတာလို့ သိရပါတယ်။
စဈတမျးတှအေရ မိဘတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ blepharoplasty လို့ ချေါတဲ့ မကျြခှံပွုပွငျမှုကို အမြားဆုံး ပွုလုပျပေးရတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆိုးလျမွို.က ခှဲစိတျဆရာဝနျတဈဦးက ကိုရီးယားအမြားစုဟာ မကျြလုံးမလှကွတာမို့ ဒီခှဲစိတျပွုပွငျမှုဟာ အထူးရပေနျးစားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အာရှသားအမြားစုဟာ မကျြနှာမှာ မကျြလုံးတဝိုကျဟာ အရေးကွီးဆုံးလို့ ခံယူထားကွတာမို့ ဒီလိုပွုပွငျကွတာလို့ သိရပါတယျ။
ကိုရီးယားမှာ ဆိုရင်လည်းပဲ လှပတဲ့ မျက်နှာဟာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်း ရဖို့ အရေးကြီးတဲ့ လက်နက်လို့ ခံယူထားတာမို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုဟာ အရေးကြီးလာနေတာပါ ။ ဟိုတုန်းကတော့ ဒါဟာ ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစားအတွက်သာ ဖြစ်ပေမယ့် ယနေ့ခေတ်မှာတော့ လူတိုင်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါပြီ။
ကိုရီးယားမှာ ဆိုရငျလညျးပဲ လှပတဲ့ မကျြနှာဟာ အလုပျအကိုငျကောငျးကောငျး ရဖို့ အရေးကွီးတဲ့ လကျနကျလို့ ခံယူထားတာမို့ ခှဲစိတျပွုပွငျမှုဟာ အရေးကွီးလာနတောပါ ။ ဟိုတုနျးကတော့ ဒါဟာ ရပေျေါဆီ လူတနျးစားအတှကျသာ ဖွဈပမေယျ့ ယနခေ့တျေမှာတော့ လူတိုငျး မဖွဈမနေ လိုအပျတဲ့ အရာတဈခု ဖွဈလာနပေါပွီ။
မျက်နှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုကို သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုထင်ပါသလည်း ?